1. Noely, vanim-potoana mahafaly amin'ny faran'ny taona rehefa miditra ny ririnina mangatsiaka. Androany dia manana menio tsindrin-tsakafo iray isika. Hanampy fahasambarana, fahafinaretana ary hafanana amin'ny fianakaviana tiantsika izany. Afaka mametaka ny matsiro miaraka amin'ny fianakaviana manontolo Mamorona rivo-piainana sy fahatsiarovana tsara tarehy, miampy mora atao, tsiro matsiro ary fitaovana mora hanomanana. Fahita any amin'ny fivarotana lehibe misy fomba fanamboarana sôkôla mafana mipoaka, akora tsotra nefa matsiro • Chocolate (Maizina, Ronono) 200 g • Marchmello 100 g • ronono vaovao (ho an'ny labiera rehefa misotro) Vonona ny kaopy 1, andao handeha miaraka amin'ny baomba sôkôla mafana.
2. Atsoniho amin'ny afo malefaka avy amin'ny vay ny sôkôla. Tokony hovakivakina izy io na hokapaina kely mba hahavony mora foana ny sôkôla.
3. Manomàna lasitra silika, manosotra dibera na menaka oliva tsy misy masirasira 1, arotsaho amin'ny lasitra ilay sôkôla nandrahoina. Ary apetraka ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 10 minitra mba hamelana ny sôkôla hangatsiaka ao anaty cubes sy endrika araka ny lasitra nofidinay. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny pirinty boribory. Satria afaka mametraka vera ianao ary mahita boribory boribory mahafatifaty
4. Rehefa milamina ny sôkôla Vonoina sy vata fampangatsiahana. Esory avy eo ny lasitra, esory ary ampio ny sôkôla ary tohizo mandra-pahatongan'ny habetsany.
5. Rehefa mihamafy ny sôkôla Ary mahazo isa mahafa-po Apetaho eo afovoany ny marshmallow. Avy eo sandwich ny sôkôla ambony sy ambany Akatona ny sombin-tsolika sisa tavela amin'ny sôkôla. Ataovy sokitra tsara endrika boribory Ary apetraho amin'ny vata fampangatsiahana indray, mora ary zava-dehibe indrindra, ny ankizy dia tia sy mankafy ireo hetsika ataon'izy ireo miaraka amin'ny fianakaviany, mazava ho azy, zava-dehibe ny fomba fanaovana baomba sôkôla mafana mora foana, azon'ny rehetra atao izany, saingy mbola tsy vita ny fizotrany. Andao hojerentsika ny fomba fihinanana azy hanampiana mamy sy hafanana amin'ity vanim-potoana Krismasy sy taom-baovao ity.
6. Ahoana ny fihinanana baomba sôkôla mafana
7. Manomàna mug tsara tarehy lehibe kokoa noho ny baomba sôkôla efa nomaninay. Raha hahazoana ny rivotra iainana Krismasy Andramo ny misafidy maitso vaovao, mena mamirapiratra, na vera izay mitondra ny mariky ny fety. Andrahoy amin'ny ronono malefaka ny ronono vaovao, afangaro mandra-pahatongan'ny volana iray volana ny ronono dia misy setroka mafana miposaka. Arotsaho ao anaty baomba sôkôla iray vera ny ronono mafana. Hofoan'ny ronono mafana ny sôkôla ary hanitra rehefa misotro. Ronono manitra mifangaro amin'ny tsiro sôkôla malefaka. Rehefa mihinana sotro Marshmallows dia hampiseho ny tsiro mamy. Ary tsiro malefaka sy mora mitsako Manome fahatsapana mafana amin'ny teny rehetra
8. Ny fanomezana tsara indrindra dia ny fitiavana, ny hafanana ary ny fisian'ny fianakaviana. Miaraha manao hetsika mahafinaritra amin'ny fialantsasatra Manao fahatsiarovana mamy Ahoana ny fomba hanaovana fipoahana sôkôla mafana Manao an-tsoratra araka izay azo atao ny fotoam-pahasambarana